နိုင်ငံရေးပြဿနာများကို အင်အားသုံးဖြေရှင်းရန် ကြိုးစားခြင်းသည် ပြည်သူအား မေတ္တာမထားနိုင်ြ? - Yangon Media Group
နိုင်ငံရေးပြဿနာများကို အင်အားသုံးဖြေရှင်းရန် ကြိုးစားခြင်းသည် ပြည်သူအား မေတ္တာမထားနိုင်ြ?
ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၁၉-နိုင်ငံရေး ပြဿနာများကို အင်အားသုံး သည့်နည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်းရန် ကြိုးစားခြင်းသည် တိုင်းရင်းသား ပြည်သူအား မေတ္တာမထားနိုင်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၏ အာဇာနည်နေ့ကြေ ညာချက်တွင် ဖော်ပြသည်။ ဇူလိုင် ၁၉ ရက်တွင်ကျရောက် သည့် (၇၁)နှစ်မြောက်အာဇာနည် နေ့ကြေညာချက်အဖြစ် အချက်ကိုးချက်ပါဝင်သည့် ကြေညာချက် ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အထက် ပါအချက်လည်းပါဝင်သည်။
ယနေ့အချိန်အခါသည် တရားမျှတသော လူ့ဘောင်တစ်ရပ်ပေါ်ထွန်းရေး၊ အေးချမ်းစွာအသက်ရှင် နိုင်ရေးတို့ကို အာမခံချက်ပေးနိုင် မည့် ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည် ထောင်စုစနစ်ကိုတည်ထောင်နိုင် ရန် ကြိုးပမ်းနေဆဲကာလဖြစ် ကြောင်း၊ အဆိုပါအခြေအနေမျိုး တွင် မိမိလူမျိုးစုတစ်စုတည်း (သို့) မိမိအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်းက တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုကြီး၏ အနာဂတ်ကို အဆုံးအဖြတ်ပေးချင် သည့်စိတ်၊ အဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းသည့်လုပ်ရပ်များသည် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက် မှ အကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်မည်မဟုတ် ကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးပြဿနာများကို အင်အားသုံးသည့်နည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်းရန်ကြိုးစားခြင်း၊ ကြိုးစား ချင်သည့်စိတ်ရှိခြင်းသည်လည်း တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုကို မေတ္တာမထားနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်သူလူထုအနေဖြင့်လည်း ¤င်း တို့အပေါ် မေတ္တာမထားသူများကို ပြန်လည်မေတ္တာထားမည်မဟုတ် ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ပါဝင် သည်။
အာဇာနည်ခေါင်းဆောင် ကြီးများကျဆုံးခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာ နိုင်ငံသည် လွတ်လပ်ရေးပန်းတိုင် ကို အရောက်သွားနိုင်ခဲ့သော်လည်း တိုင်းရင်းသားအာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး များ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်တကွ အာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများ၏ အမူ အကျင့်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် နိုင် ငံရေးပြဿနာကို နိုင်ငံရေးနည်း လမ်းဖြင့်ဖြေရှင်းသည့်အမူအကျင့် ကိုမူ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်း မရှိသည့်အတွက် လက်ရှိအချိန်ထိ ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံတည်ထောင်နိုင်ရေးကို ဆက် လက်ရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်ကြောင်း လည်း ထုတ်ပြန်ချက်၌ဖော်ပြထား သည်။
လူမျိးတစ်မျိုး၊ အုပ်စုတစ်စု တည်းက ပြည်ထောင်စုကြီး၏ ကံကြမ္မာကို ဆုံးဖြတ်သည့်အခြေအနေသည် ပြည်သူလူထုအပေါ် စေတနာ မထားရာရောက်ကြောင်း ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းက သဘောပေါက်ကာ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းသည့်နည်းလမ်းကို အသုံးပြုပြီး ပင်လုံညီလာခံအား ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေး ပြဿနာကို နိုင်ငံရေးနည်းဖြင့်သာ ဖြေရှင်းခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းအတွက် ကြောင့် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် များကလည်း ဗိုလ်ချုပ်တို့နှင့်အတူ လက်တွဲခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း လည်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ပါဝင် သည်။
အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်များ ကြိုးပမ်းခဲ့သည့် အေးချမ်းသာယာပြီး ဖွံ့ဖြိုးသည့်နိုင်ငံဖြစ်ရေး အာ??
”နိုင်ငံခြားက အနုပညာရှင်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ ရုပ်ရှင်တွေ ရိုက်ကူးသွားဖို့ ရှိတယ်” ပ?